Jabuuti oo laba batalyan oo ciidamo ah u soo diraysa Soomaaliya. – Radio Daljir
Jabuuti oo laba batalyan oo ciidamo ah u soo diraysa Soomaaliya.
Jabuuti, 15 May- Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ay Soomaaliya u soo dirayso 2,000 askari oo qayb ka noqon doona hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee Amisom.
Wasiirka umuuraha dibadda ee dalkaas Maxamed Cali Yuusuf ayaa sheegey in ay dowladdiisu sannadihii ugu dambeeyey ay diyaarinaysay ciidamada Soomaaliya tagaya, imikana agab iyo tabba ay u dhammaysay, diyaarna ay u yihiin in ay u ambabaxaan Soomaaliya dabayaaqada bishan.
?Ciidamadayada wax kasta oo agab milatari ah waa loo diyaariyay, bishan dhammaadkeedana waxay tagayaan Soomaaliya, si ay dowladda kumeel gaadhka ah uga caawiyaan nabadda? ayuu yidhi Maxamed Cali Yuusuf, wasiir arrimo dibadeedka Jabuuti.
Intii aan ciidamadan loo diyaarin in ay Soomaaliya tagaan, waxa ay Jabuuti kala tashatay dalal dhawr ah iyo ururo, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Midowga Afrika, iyo dalalka jaarka sida Itoobiya, sida uu sheegey wasiir khaarajiga Jabuuti.
Jabuuti waxa ay noqonaysaa dalkii saddexaad ee ciidamo u dira Soomaaliya, waxana ay tallaabadani ku beegmaysaa xilli ururka Alshabaab ee lala xidhiidhiyo Alqaacidda uu sheegey in uu u aargudayo Usaama Bin Laadin oo ay horraantii bishan ciidamada Amerikanku ku dileen magaalo u dhow xarunta dalka Pakistan ee Islam-abad.
Dalalka Uganda iyo Burundi ayaa ay Muqdisho ka joogaan in ka badan 9,000 askari. Dhawaanna ra?iisal wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo waxa uu codsaday in ciidamada Amisom lagu soo xoojiyo 4,000 askari oo dheeraad ah, kuwaas oo qayb ka noqonaya hawlgalka Amisom.
Bishii Maarso ee sannadkan ayaa ay dowladda Burundi Muqdisho u soo dirtay 1,000 askari, sidoo kalena ay sheegtay in ay badhtamaha sannadkan ku soo darayso 3,000 askari oo kale.
Ciidamada Jabuuti iyo Burundi ka imanaya waxa ay ku soo beeganyihiin xilli ay marxaladda colaadeed ee dalku ay sii durkayso, dagaalka ka dhanka ah Alshabaab ee ay wadaan dowladda, Amisom, iyo Ahlu sunna waljaamacana uu degaanno hor leh oo ka kala tirsan caasimadda Soomaaliya, gobollada koonfureed iyo kuwa dhexe uu ku sii fidayo.